ယ်ယူရန် Proviron (Mesterolone) အမှုန့် (1424-00-6) hplc ≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / Proviron (Mesterolone) အမှုန့်
SKU: 1424-00-6. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Proviron ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Mesterolone) အမှုန့် (1424-00-6) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
အမည်: Proviron (Mesterolone) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 208 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) အသုံးပြုမှု
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) အမည်များ
Mesterolone လည်း Proviron အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) အသုံးပြုမှု
Proviron ဆေးများပုံမှန် 50-150mg ထံမှတစ်နေ့လျှင်အထိ။ အများစုမှာယောက်ျား, သို့သော်တစ်နေ့လျှင် 100mg 100mg နှင့် 150mg နှစ်ဦးစလုံးမြင့်မားထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးအကျိုးရှိသောထိုးဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့် 8-12 ရက်သတ္တပတ်များအကြားကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သံသရာတစ်ဦးအဓိကအတားအဆီးအောင်မြင်မှုများဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် Proviron တစ်6တပတ်သင်တန်းလှည့်ကွက်ပြုစေခြင်းငှါတစ်သံသရာ၏အဆုံးကိုဦးတည်ဟုဆိုသည်။
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့်အပေါ်သတိပေး (Proviron အမှုန့်)
Proviron အသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်; သို့သော်ဒီ Steroid တစ်မျိုးလုံးကိုဟို steroids တို့တွင်အမြင့်မားဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှု ratings တွေထဲကသယ်ဆောင်။ အများစုမှာယောက်ျားမဆိုအနုတ်လက္ခဏာပြဿနာမရှိဘဲဤ Steroid တစ်မျိုးသုံးစွဲဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးဖြစ်နိုင်ခြေကြားမှတည်ရှိနေပါဘူး။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကိုအသုံးပြုခြင်းမှကြွလာသည့်အခါတစ်ဦးကုထုံးသို့မဟုတ် performance ကိုစွမ်းရည်မြှင့်၌ဤ Steroid တစ်မျိုးအကြံပြုမရနိုင်ပါ။ virilization နှုန်းမြင့်မားဖို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ဣတ္ကာကွယ်ပေးရန်ဆန္ဒရှိသူကိုအမျိုးသမီးအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) ဒါ့အပွငျညွှန်ကြားချက်
တစ်ဦးကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ်, Proviron ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Mesterolone ဟော်မုန်းအမေရိကန် FDA ကအတည်ပြုဖူး။ ဒါဟာအဓိကအားအထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်ဥရောပဆေးပညာတှငျတှေ့ရလိမျ့မညျ။ အသုံးပြုမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အသက်အရွယ်အခြေအနေကို၏အသုံးအများဆုံးတရားခံဖြစ်ခြင်း, အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့ကုသနေပါတယ်။ ဒါဟာသို့သော်အဖြစ်ကောင်းစွာ Pre-pubescent ယောက်ျားတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဟော်မုန်းကိုလည်းယောက်ျားတစ်ဦးကလေးမွေးဖွားအကူအညီအဖြစ်အသုံးပြုအများစုဟို steroids ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့လေ့အဖြစ်တစ်ဦးတည်းကဒီကအလွန်ထူးခြားတဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးစေသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင် Proviron ကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်ကာလအတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုး Masteron ဆင်တူတဲ့တင်းမာအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးသည်အခြား steroids ၏ hardening သက်ရောက်မှုပိုမိုခံရလိမ့်မည်။ ထိုအခါမှသာတကယ်တော့တစ်ဝေးပိုပြီးထိရောက်မှုနှုန်းမှာခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုမီးမရှို့ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကို enable တံ့သောအန်ဒရိုဂျင် receptor, ရန်၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့စည်းနှောင်စဉ်းစားပါ။ ဒီကနေကျနော်တို့ Proviron ၏ Anti-အီစထိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုရေ retention ကိုလျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့သည်နှင့်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, စုစုပေါင်းသံသရာပေါ် မူတည်. ကြောင့်ရိုးရာ Anti-အီစထိုဂျင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း negate နိုင်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါမှသာတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့၏တိုးမြှင့်ကျန်ပါတယ်။ ဤသည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဟို Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှု၏ဤအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းမကြာခဏအများကြီးနိမ့်သည့်အခါတစ်ဦးကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့အခြားဟို steroids ပါဝငျသောအနိမ့် dosed testosterone ဟော်မုန်းသံသရာနှင့်အတူကျနော်တို့စိတ်ချလက်ချစုစုပေါင်းရလာဒ်များမသောသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Proviron ပါဝင်သည်သူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အဆုံးမှာတော့အဓိကအခြေစိုက်စခန်းအကျိုးရှိတာပိုခက်နှင့်ဝေးပိုပြီးပုံစံလုပ်ရန်ကောင်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းသည်အခြား steroids ၏တိုးမြှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Proviron အများဆုံးဆက်ဆက်သင်သည်ပိန်များမှာမဟုတ်လျှင်သူတို့သိသာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဤစရိုက်များပေးနိုငျနေချိန်မှာဒါဟာသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်)
ကုန်ကြမ်း Mesterolone အမှုန့် (Proviron အမှုန့်) Marketing ကို
AASRAW ထံမှ (Proviron အမှုန့်ကိုဝယ်) Mesterolone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို